Uphume phambili uPhat Joe kwelesisebenzi sasendlini | News24
Uphume phambili uPhat Joe kwelesisebenzi sasendlini
Durban- Umsakazi othandwa kakhulu ngokuba uvovo-luyakhipha uMajota Khambule owaziwa ngelikaPhat Joe‚ uphume phambili ecaleni ebeliqulwa e-Commission for Conciliation‚ Mediation and Arbitration (CCMA) lapho isisebenzi sasendlini yakhe besimsola ngokumxosha ngokungemthetho.
Lesi sikhungo esidingida amacala abasebenzi sisikhabele ngaphandle isikhalazo ngokuthi ukuxoshwa kwalesi sisebenzi uNontembiso Vumazonke‚ kwakusemthethwini.
OLUNYE UDABA:Umsakazi woKhozi uthi ngeke umfice uDisemba - Umbiko
UPhat Joe uthe lolu daba luvele lwaphenduka into enkulu abantu befuna ukudicilela phansi igama lami, bangaqaphela ukuthi ngiyilandele yonke imigomo yokuphatha isisebenzi.
Inyunyana iSA Domestic Service and Allied Workers’ Union (Sadsawu) isebenzise lolu daba njengethuba lokuhambela emaphepheni basakaze izinto ezingahambisani nalolu daba.
“Le nyunyana idlale ngaye ukuze bazidayise bona bazothola abalandeli abaningi,”kusho lo msakazi.